Edge Chromium ine mutambo we surf kunge zai repasita | Linux Vakapindwa muropa
Edge Chromium ine mutambo we surf sezai repasita. Saka unogona kuzviedza
Tichifunga nezve nyaya yekuwiriranisa, kunyange izvi zvingangogadziriswa mune ramangwana, ini handisi kunyatsojeka nezve chii Edge Chrome tora vashandisi veWindows kuti vakanganwe nezveGoogle Chrome. Kune zvese zvimwe zvinhu, ibrowser iyo inopa sarudzo uye kuita kwakanaka, saka zvese zvinogoneka. Iyo vhezheni nyowani yakavakirwa paChromium, senge Chrome, uye izvo zvavakavewo "vakakopa" mune yayo yazvino vhezheni vhezheni ndeyekuti ivo vaisanganisira iyo Easter zai.
Chrome yaisanganisira mutambo wezve dinosaur se "Zai reIsita." Edge Chromium yaita zvakafanana, asi iyo mutambo wakasanganisirwa ndeimwe yekufambisa ine zvishoma zvirinani mifananidzo uye izere ruvara. Nzira yekuiwana iri nyore, nekuti hazvina basa kana isu takabatana neinternet kana kwete, asi zvakare ichafanirwa kuitwa kubva kuURL bar. Chinyorwa chatinofanira kuisa ndechekuti pamucheto: // surf, panguva iyo iwe uchaona chimwe chinhu senge chinoratidzwa muvhidhiyo iyo iwe unayo pazasi (uye ndinovimba unosimudzira).
1 Ngatifambei, Eki Isita neEdge Chromium
2 Zvichauya kuLinux?
Ngatifambei, Eki Isita neEdge Chromium
Chekutanga pane zvese, zvinoita sekunge zvakakosha kutaura kuti mutambo uyu hauwanikwe mune yakagadzikana vhezheni yeEdge Chromium, parizvino makumi masere uye chete yeWindows. Iri mu v80 umo iyo Dev uye Canary shanduro yebrowser uye iyo iwe yaunogona kurodha pasi kubva Iyi link. Kana iwe uchishamisika, zvinokwanisika kuisa akati wandei vhezheni dzeEdge pakombuta imwe chete, iyo inotibvumidza isu kuchengetedza iyo yakagadzikana vhezheni uye nekuisa iyo Dev kana Canary pasina kumhanyisa njodzi.
Sezvo ndatsanangura zvese zviri pamusoro, mutambo hausi wakanyanya kunaka pasirese, chimwe chinhu chine musoro kana tichifunga kuti iri zai reIsita rakabatanidzwa mune software isina chekuita nemitambo yemavhidhiyo. Ndiwo mutambo we surf watinozofanira enda kumberi sezvatinogona, kuyedza kunzvenga zvipingamupinyi, zvakaita semaboys, vamwe vafambi, iyo Kraken, matombo zvichingodaro. Kune zvakare marampu anotibvumidza isu kusvetuka chikamu pasina njodzi yekurasikirwa chero hupenyu.
Munguva pfupi yapfuura, muzvirongwa zvekuvandudza zveEdge Chromium isu takakwanisa kuona kuti iyo Linux vhezheni yebrowser iri munzira yemugwagwa uye zvinoita sekunge ichasvika mushure mezhizha. Tichifunga nezvekuti Edge 82 ichasvika imwe nguva muna Kubvumbi, zvinopfuura zvingangoita kuti, kana iyo Linux vhezheni, iyo surf mutambo watove mune yakagadzikana vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Edge Chromium ine mutambo we surf sezai repasita. Saka unogona kuzviedza
Uye ndinozviidza sei? inoshanda newaini here? Ini handinzwisise nhau: /
Mhoro, Bubexel. Parizvino haina kuwanikwa yeLinux. Kana iwe uchida kuyedza iwe unofanirwa kushandisa iyo Dev kana Canary vhezheni yeWindows.
LibreOffice 6.4.1 uye 6.3.5 yatovepo kugadzirisa zvikanganiso mune ese akateedzana, angangoita mazana maviri muhuwandu hwakazara
Iyo 5th beta yeParrot Security OS 4.8 yakagadzirira kuyedzwa